Mpanazatra ny indostrian'ny indostrian'ny famantaranandro mahery fihenam-bidy
Home / Applications / Hira fisaorana / Fikolokoloana fampidirana fampidirana
Sokajy: Hira fisaorana Tags: fantsona mitentina mihena mitentina, fantsona mitentina mety, fantsom-bidy mety hantsana, fametrahana rivotra fantsom-panjaitra, Induction shrink fitify, fanorana mitaky fanafanana mety tsara, milina fampitaovana mitaky fihenam-bidy, Mitadiava fihenam-bidy, Mandrosoa fitongilanana
Mampiendaka ny fametrahana ny fametrahana ny fametrahana ny fametrahana ny fametrahana ny fitaovana fanamoriana ny IGBT
Ny tanjona dia ny hanasongadina fivoriam-pivarotana ho an'ny fampihetseham-pako
Fanamoriana vy sy diamond 1 "mankany 3.5" (25.4 mankany 89mm)
Temperature 300 ° F (150 ° C)
Fitaovana fampidirana herinaratra fampidiran-kery DW-UHF-6kW miaraka amina tobin-tsolika lavitra misy fasiteran'ny 0.1 μF roa (total 0.2 μF), coil-pampana fampidirana izay natao sy novolavolaina manokana ho an'ity fampiharana ity.
Fomba fanodinana coil hélique multi-turn no ampiasaina hamoronana lamina hafanana takiana. Ny fitifirana dia napetraka ao anatin'ny coil-induction-induction, ny axis dia mifandraika amin'ny axis an'ny coil mba hanaterana fanamiana
hafanana amin'ireo peratra habe isan-karazany amin'ny fiterahana. Izy io dia miantoka ny fitomboan'ny fivondronan'ny fiambenana ho an'ny fihenan'ny vy. (Ny haben'ny zana-kazo feno dia azo hafanaina amin'ny famolavolana coil tokana.) Ny loko misy mari-pana dia manamarina ny fitovian'ny maripana sy ny fotoana ilaina hahatratrarana
mari-pana. Mafana tsara ny fivondronana ary mahatratra 300-350ºF (150-175 ° C) ao anatin'ny 30-60 segondra. Raha vao nafanaina, dia mora mihena ny bearings amin'ny shaft nefa tsy ampiasaina
hery avy any ivelany.
Vokatra / tombontsoa azo avy amin'ny coil hélique multi-turn ny hafanana mitovy amin'ny haben'ny fiterahana rehetra amin'ny maody transverse. Ny fampiasana an'ity famatsiana herinaratra singlephase ity dia manamora ny fametrahana azy ary mampiroborobo ny fitobiana: ny rafitra fampidirana dia azo apetraka amin'ny sarety ary hafindra any amin'ireo faritra famokarana mitaky ny hafanana amin'ny fametahana.